Blackphone 2 famerenana: privacy doesn't have to come at the cost of usability - News Fitsipika
Blackphone 2 famerenana: Tsy manana fiainana manokana ho avy amin'ny vidin'ny fiasa izany
Tsy ny tena mandroso, ny fakan-tsary dia malemy sy ny nanaovana izany fa tsotra, nefa dia mahagaga fa tena useable ny rindrambaiko sy ny tolotra dia. The Blackphone 2 mitandrina ny bests potika Android sy tsy mahazo ao amin'ny fomba tahaka be dia be ny fiainana manokana-orientated tolotra manao.
Ity lahatsoratra mitondra ny lohateny hoe “Blackphone 2 famerenana: Tsy manana fiainana manokana ho avy amin'ny vidin'ny fiasa izany” nosoratan'i Samuel Gibbs, fa theguardian.com tamin'ny Alarobia 11 Novambra 2015 07.30 UTC
Ao anatin'ny tontolo maty eritreritra Apps sy ny teknolojia orinasa ampy, ny Blackphone 2 Mampanantena ny hanampy foana ny mombamomba manokana tsy mahazo ao an-dalana.
Ny andiany faharoa ny Blackphone amin'ny alalan'ny fiarovana sy ny fiainana manokana Mangina orinasa Circle dia dingana ao ny fiasa izany, ary dia mahagaga mora ny nanangana sy mampiasa, na dia ho an'ny fiainana manokana novices.
Tsy misy zavatra unhackable, mazava ho azy, ary naka fanahy ny fomba tsy voahozongozona dia ny fanafihana tsy azo atao amin'izao dingana.
Ny volafotsy 'S' dia mikasika ny fanamarihana toerana ihany fa ny Blackphone zavatra manokana. Sary: Samuel Gibbs ho an'ny Guardian
Ny Blackphone 2 ny monolithic fomba tiany ny tanjona. Avy any ivelany dia mijery tahaka ny tsara avokoa nametraka-levitra mainty slab. Front sy miverina dia fitaratra, boribory ny lafiny plastika.
Ny hany Soso-kevitra fa tsy ny sasany fotsiny levitra fitaovana kely dia zara raha hita Mangina Circle famantarana ao ambadiky ny teny hoe "blackphone" sy ny "tsy miankina amin'ny famolavolana" Amin'i Jehovah Ireo Fotsy-on-mainty soratra.
Tena Tena mahazo aina ny hihazona, ary tsy tahaka malama toy ny fitaratra hafa finday avo lenta, fa mitondra ny dian-tanana toy ny andriamby. Ny 5.5in 1080p LCD lamba dia mamirapiratra sy velombelona ara-drariny. Izany dia mitovy tsara ny izay ampiasaina ao amin'ny OnePlus 2, ohatra, fa tsy tena amin'ny feh amin'ny izay mendrika ny Rohy 6P na Galaxy S6 Edge +.
Ny telefaonina dia 7.9mm matevina, izay momba ny eo ho eo noho ny amin'izao andro izao ny telefaonina sy mahatsapa tsara nanorina. Tsy flexes kely eo ambany fanerena avy amin'ny tananao, izay midika fa mety tsara indrindra tsy mba nataony tao amin'ny paosy indray ary mipetraha.
Processor: octa-fototra Qualcomm Snapdragon 615
RAM: 3GB ny RAM
Storage: 32GB; microSD karatra slot
Rafitra fikirakirana: Silent OS 2 mifototra amin'ny Android 5.1.1
Camera: 13MP aoriana fakan-tsary, 5MP anoloana-miatrika fakan-tsary
Fifandraisana: LTE, Wifi, Bluetooth sy ny GPS
Ny faneva microUSB slot ao ambany. Sary: Samuel Gibbs ho an'ny Guardian
The Blackphone 2 manana ny tapaky ny volana Qualcomm-isan-karazany Snapdragon 615 processor, izay mahery vaika tokoa ampy amin'ny telefaonina ny hitiavan'ny mpihaino. Tsy nahatsapa snappy, haingana toy maimaim-poana sy chewed alalan'ny multitasking tsy misy olana.
Ireo miezaka mafy ny hilalao lalao-tsipiriany ny mety manahirana, Fa raha izany no ianao rehefa Tsy azoko antoka hoe nahoana ianao mieritreritra ny Blackphone.
Hitako fa ny Wi-Fi fandraisana dia tsy toy ny mety ho, toy izany koa raha oharina amin'ny fitaovana, nefa 4G dia tsara fandraisana, tahaka ny tamin'ny antso toetra.
Naharitra ny finday avo lenta ihany ambany 24 ora isan-poana, amin'ny fampiasana ara-drariny mavesatra sy ny maro ny hanoto mailaka sy ny fampahatsiahivana. Ianao dia mila handidy azy indray mandeha isan'andro, fa tokony hahita anao mandra-any an-trano na dia mivoaka amin'ny alina.
ankapobeny, tsy te ianao nanaiky lembenana na inona na inona amin'ny anaran'i fividianana ny "fiarovana" finday.
Lollipop etỳ ambonin'ny
Google sy ny Silent Phone tamin'ny fitaovana iray, ny safidy mba hitandrina ny vaovao ho toy ny tianao manokana. Sary: Samuel Gibbs ho an'ny Guardian
Fahanginana Circle nanorina Mangina OS amin'ny tampon'ny Google ny Android 5.1.1 Lollipop, izay ihany vao nosoloina Malagasy Bible 6 Marshmallow.
Ankoatra ny mahaliana baotin'i fanentanana, dia mijery ary mitondra tena toy ny tahiry Android. Ianao afaka mampiasa ny Google Apps rehetra sy ny Play Store mba télécharger-antoko fahatelo fampiharana tsy misy tena sakantsakana.
Ny hany tena fanampiny hita amin'ny maso tsy zatra dia Security Center matoanteny, ny Silent Store sy Mangina Phone fampiharana, izay zavatra tsara toy ny olona izay zatra Android dia ho marina ao an-trano.
Ny tahiry Android-apparence saron-tava miafina sosona ny fiarovana sy ny fiainana manokana naorina tao an-telefaonina.
Ny Security Center fampiharana mandeha ny mpampiasa ny alalan 'izany, fa indrindra granular manana fanaraha-maso ny tsy ny tahirin-kevitra manokana izay Apps afaka mahazo, fa koa ny fitaovana sy ny tolotra omen'ny ny telefaonina.
Tsy mila ny fampiharana ny fidirana amin'ny toerana manana antontan-kevitra, na ny aterineto? Tsisy olana. Tsy miasa ao amin'ny Toy izany koa ny tontolo alalana vaovao napetraky Google in Marshmallow ary nanao malaza amin'ny Cyanogen OS.
Ny Security Center fampiharana mandeha anao amin'ny alalan'ny fiainana manokana sy ny fiarovana ny safidy. Azonao atao mihitsy aza atao hoe Google-toerana maimaim-poana. Sary: Samuel Gibbs ho an'ny Guardian
Ny isam-fampiharana fanaraha-maso iray ihany ambaratonga. The Blackphone 2 manana ahoana izany hoe "toerana". Toerana tsirairay dia toy ny misaraka profil mpampiasa ao anatin'ny fepetra izay azo atao amin'ny rafitra sehatra. Toerana tsirairay dia tsy afaka miresaka amin'ny hafa, antoka izay nataonareo tao an azy mijanona ao. Afaka manana, ohatra, toerana noho ny asa mailaka, fifandraisana, tetiandro sy ny antontan-taratasy izay mimanda eny amin'ny faritra hafa ao amin'ny telefaonina.
Raha te-hampiasa ny fampiharana ny hevitrao fa mety ho mampidi-doza, dia afaka mametraka izany ao amin'ny toerana mihidy nidina mba raha tsy miezaka sy manao zava-mahatahotra izany ny mitoka-monina avy amin'ny sisa ny angona.
Mahazo toerana ny tsirairay dia tsotra. Azonao atao na ny mifamadika sehatra niaraka avy ny lockscreen miaraka amin'ny mari-pamantarana samihafa, na mampiasa ny switcher ao amin'ny fampahafantarana alokaloka. Ny haavon'ny fiarovana manome toerana tsirairay dia azo ovaina, ao anatin'izany ny fahafahana lockdown toerana hafa rehetra, raha manokana iray misy mpanao.
Companies dia afaka hamaritra ny toerana sy hifehy fitsipika momba izany, izay midika hoe afaka mifangaro manokana sy miasa eo amin'ny telefaonina izany tsy nanaiky lembenana angona fiarovana. Maro ny fitaovana hafa, anisan'izany ny BlackBerrys afaka manao zavatra toy izany koa.
Rehefa mora na ho sarotra ampiasaina rehefa nifidy
Randomise ny fantaka pad amin'ny lockscreen ho an'ny fiarovana fanampiny. Sary: Samuel Gibbs ho an'ny Guardian
Isaky ny fametrahana sy fampiendrehana toa sarotra, fa ny Security Center afaka mitari-dalana azy ireo mpampiasa amin'ny alalan'ny. Amin'ny ampy faharetana dia afaka miasa ao anatin'ny zava-drehetra eo 30 minitra.
Midika izany fa afaka manao ny finday ho mora na ho sarotra ampiasaina ho toy ny fiarovana fepetra takiana didy fampisamborana. Afaka randomise ny fantaka pad amin'ny lockscreen, izay mahatonga izany zavatra izany sarotra ho an'ny olona iray ny Snoop noho ny sorony anao passcode, fa koa no mahatonga azy mafy mba hamaha ny telefaonina.
Zavatra hafa mendrika ny homarihina dia mandeha ho azy na eny amin'ny ara ny Wi-Fi mifototra amin'ny toerana, ny teny fikasana ny fanampim-baovao haingana amin'ny rafitra fandidiana mivantana avy mangina Circle mba hahazoana antoka fiarovana bibikely no nitampintampina araka izay haingana araka izay azo atao, ary ny fitaovana encryption izay eo amin'ny toerana misy anao.
Mangina Phone sy Store
Ny mangina Store ahitana fampiharana vetted ny Silent Circle, fa izy ireo no vitsy sy lavitra eo. Sary: Samuel Gibbs ho an'ny Guardian
Amin'ny fanampiny ho amin'ny fanovana ambadiky ny sehatra natao ho Android, Mangina Circle misy mari-pamantarana manome feo miantso sy hafatra amin'ny alalan'ny fampiharana ny Mangina Phone.
Izany encrypts antso an-telefaonina sy ny hafatra raha tsy eo Mangina Phone mpampiasa, fa Silent Phone tsy ampy amin'ny iOS sy ny Android roa, izay midika fa tsy Blackphone mpampiasa dia afaka miantso.
Mitaky ny famandrihana teo-tampon'ny findainao fifanarahana, fa dia matetika ho nafatotra ho amboarany amin'ny hividianana ny Blackphone. Noho ny isan'ny mpampiasa Phone mangina kely, fa ny jiro amin'ny ankapobeny ihany ny fiainana, Fa raha misy raharaham-barotra na ny vondrona dia ny mividy ambongadiny ho eo an-Blackphone afaka hiresaka izy ireo tsy amin-tahotra ny ho snooped tamin'ny.
Afaka miantso tsy Mangina Phone mpampiasa, izay nahazoany ny antso an-tariby mandra-mila ny nentim-paharazana mifandray amin'ny tambajotra finday, izay tsy ho azo antoka, fa mamela ireo mpampiasa mba tsy ho snooped avy ny fotoana 'ny antso, raha ohatra ianao no miantso aterineto manerana ny hatoky tena fifandraisana.
Ny Silent Store dia manolotra ihany koa ny fampiharana izay efa vetted ny Mangina Circle mba ho hipetraka fotsiny maimaim-poana. Ny kely fifantenana ny fampiharana dia ahitana Firefox, mpiambina, hamehezany: Proxy amin'ny Tor sy Ghostery Privacy Browser, Misy video rehetra amin'ny Circle Mangina ny tombo-kase ny fankatoavana.
Ny fakan-tsary dia tsy manoratra na inona na inona ho an-trano momba ny, fa hanao ho Mitady handrapaka sary ny antontan-taratasy na ny saka. Sary: Samuel Gibbs ho an'ny Guardian
Ny 13-megapixel fakan-tsary dia na inona na inona mba niantsoantso momba ny. Mahatonga eo ho eo io sary tsara jiro, fa nanasa avy, dull images when shooting indoors under artificial light.
Fa raha oharina, BlackBerry’s Priv Android phone costs £559 and offers similar work-private life segregation.
Mahatsara: security without an overburden of difficulty, spaces, normal Android experience, encrypted phone calls, snappy fampisehoana, promise of rapid security updates
Maharatsy ny mifampiresaka: bland design, weak cameras, lafo, weaker than expected Wi-Fi connectivity
Android, Article, Gadgets, Finday, Privacy, Famerenana, Samuel Gibbs, Smartphone, Teknolojia, fifandraisandavitra, World vaovao
← Ny tsara indrindra finday avo lenta (2015) [VIDEO] Amazon Fire takelaka famerenana →